IKWAZULU NATAL NOHLELO LOKUXHASA OSOMABHIZINISI ABASAFUFUSA – Sivubela intuthuko Newspaper
LUSEQHULWINI uhlelo likahulumeni wesiFundazwe, saKwaZulu Natal lokulekelela osomabhizinisi abancane ukuze badlondlobale.
Lezi zindaba ziqisekiswe nguNdunankulu wakulesi siFundazwe, uMnuz Sihle Zikalala. Ubekade ekhuluma kabanzi ngohlelo lokuxhaswa kosomabhizinisi abasafufusa baKwaZulu Natal olubizwa ngokuthi yiKZN Youth Fund.
Kuhlalukile nokuthi ifinyelela ku-R69 million imali ezosetshenziselwa ukulekelela osomabhizinisi abasafufusa baKwaZulu Natal ngaphansi kwalolu hlelo olubonakala luzofana nesibani kubantu abasha abaningi bakulei siFundazwe.
Ngokusho kukaMnuz Zikalala ayikho into emqoka ngaphezulu kokesekwa kosomabhizinisi abancane. Uchaze osomabhizinisi abasafufusa njengabantu abawumgogodla womnotho waKwaZulu Natal.
Uthe yingakho nje kuseqhulwini kubona ukubhekelela izidingongqangi zosomabhizinisi abasafufusa. “Thina sikholwa ukuthi abantu abasha kumqoka ukuba bangene kwezamabhizinisi bangesabi. Thina njengohulumeni waKwaZulu Natal kungumsebenzi wethu ukuqinisekisa ukuthi siyabeseka ngaso sonke isikhathi osomabhizinisi bethu abancane abanentshisekelo yokudlondlobalisa amabhizinisi abo,’’usho kanje.
UMnuz Zikalala uveze ukuthi lolu hlelo olumqoka kangaka lokwesekwa kosomabhizinisi abasafufusa balusungula eminyakeni emithathu eyedlule.
Uthe inhloso enkulu yabo kwakungukulula isandla ngenhloso yokunikezela ngosizo lwemali nolwezinsiza kusebenza kulabo somabhizinisi abasafufusa kodwa ababhekene nengwadla yokungazi ukuthi bazothathani bahlanganise nani ukuze amabhizinisi abo abe nenqubekela phambili.
Eqhuba uMnuz Zikalala uthe lolu hlelo baluqhuba ngoba banethemba elikhulu abanalo ngabantu abasha baKwaZulu Natal namaphethelo. Ugcizelele ukuthi abasoze balilahla ithemba ngabantu abasha baKwaZulu Natal ikakhulukazi labo abanentshisekelo yokuba ngosomabhizinisi abavelele ngokuhamba kwesikhathi.
Echaza uthe: “Likhulu kakhulu ithemba esinalo ngabantu abasha baKwaZulu Natal. Yingakho nje singasoze salenza iphutha lokuthi sibayekelele. Siyohlale njalo siqinisekisa ukuthi siyabalekelela ukuze bezokwazi ukuthola lokhu abakufisayo empilweni yabo.’’UMnuz Zikalala uthe bakholwa ukuthi osomabhizinisi abancane baKwaZulu Natal yibona abamqoka kakhulu ekuqinisekiseni ukuthi uyadlondlobala umnotho wesiFundawe